बाहिरियो दाजु भाई माथि श्रीमती देखि स-परिवार को कल रेकर्ड! नसोचेको अवस्था अगाडी आउँदा सबै चकित। (भिडियो हेर्नुहोस) – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/बाहिरियो दाजु भाई माथि श्रीमती देखि स-परिवार को कल रेकर्ड! नसोचेको अवस्था अगाडी आउँदा सबै चकित। (भिडियो हेर्नुहोस)
जेठो छोराको प्रेम विवाह भएको बुवाको भनाई छ । बुहारी विवाह भएको दुई महिना नहुँदै एक्लिएपछि परिवारमा त्यो चिन्ता पनि थपिएको छ । वुहारीको परिवारलाई पनि छोराले औषधि खाने गरेको बारेमा जानकारी दिएको बुवाको भनाई छ । बुहारी र उनको परिवारको राजिखुसीमै विवाह गरिदिएको उनको भनाई छ । ६ महिना अघि मात्र यो घरवाट अर्को शव पनि उठेको थियो । दुई युवाको हजुरवुवाको असारमा निधन भएको थियो ।भिडियो हेर्नुहोस
प्रधानमन्त्रीलाई बालुवाटारबाट घिसार्छौ | रत्नपार्कमा नि:शुल्क खाना खुवाउन रोकेपछी रिसले आगो -(हेर्नुहोस भिडियो)